Barnaamijyada Shabakadda - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Adeegga Horumarinta Codsiga Webka
Horumarinta dalabka websaydhka waxaa loola jeedaa abuurista codsiyada ka badan server fog oo laga heli karo internetka. Horumarinta barnaamijka Webka ayaa si xawli leh ugu xuubsiibtay tobankii sano ee la soo dhaafay. Horumarinta abka webka ee soo jireenka ahi wuxuu ka koobnaa abuurista bogag ma guurtada ah oo awood u leh internetka, hase yeeshe, hadda waxaan ku nimid waddo dheer. Imaatinka CMS (Nidaamka Maareynta Mawduuca) iyo qaabdhismeedka horumarinta websaydhka ayaa ka dhigay horumarinta dalabka websaytka la habeeyay mid shaqeynaya, fudud oo loo dhowaan karo. Codsi websaydh hufan ayaa ku dari kara waxqabadkaaga ganacsi, wuxuu u adeegi karaa aalad is dhexgal u dhexeysa ganacsiga iyo macaamiisha, fududeynta gelitaanka xogta, iyo kobcinta guud ee ganacsigaaga. Maanta, horumarinta barnaamijyada websaydhka gaarka ah waxay leedahay awood badan oo loogu adeego ganacsiyada iyo ka faa'iideysiga awooddeeda waxay siinaysaa ganacsigaaga gees dheeraad ah.
Horumarinta Barnaamijyada Webka
Codsiyada websaydhku si aad ah ayey isu beddeleen. Hadda waxaan awoodnaa inaan horumarinno barnaamijyo kala duwan oo webka ah oo xallin kara dhibaatooyin kala duwan si fudud oo hufan. Hadafku maahan in la horumariyo codsiyada laakiin waa in la siiyaa xalalka howlaha soo noqnoqda ee caadiga ah iyo yareynta dadaalka aadanaha. Waa kuwan qaar ka mid ah noocyada codsiyada websaydhka ee aan horumarinno:
1. Codsiga Websaydhka Dynamic:
Bogga ma guurtada ah wuxuu siiyaa isla macluumaadka dhammaan isticmaaleyaasha. Bogaggan, sida buugyaraha internetka, waxay u shaqeeyaan si isku mid ah dhammaan isticmaaleyaasha. Dhinaca kale, howlaha firfircoonida ee websaydhka waxay ku saleysan yihiin codsiyo gaar ah oo uu soo gudbiyo isticmaalaha. Waxyaabaha ay soo gudbiyaan bogagani waxay ku saleysan yihiin ficilada isticmaaleha sidaas awgeed way ku kala duwan tahay shaqsi kasta, tusaale ahaan, baraha bulshada.
2. Madasha E-commerce:
Kor u kaca ganacsiga e-commerce wuxuu kiciyay kor u kac weyn oo ku yimid tirada aaladaha e-commerce ee maanta la heli karo. Laga soo bilaabo Magento ilaa WooCommerce ilaa Shopify, at NewGenApps waxaan ku takhasusnay horumarinta mid kasta oo ka mid ah meelahan. Xalalkayaga e-commerce ee la habeeyay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah nidaamyada talo bixinta iyo qaabaynta saadaasha taas oo ku dari karta xoojin aad u weyn awoodaha maareynta e-commerce.
3. Codsiga Websaydhka:
Si ka duwan barnaamijyada dhaqameed ee websaydhka, boggaga waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin bakhaar xog laga helo ilo kala duwan. Shabakad websaydh ah ayaa kala soocaysa, soo koobaysa oo liis garaynaysa ilo ku saleysan shuruudo gaar ah waxayna u soo bandhigeysaa macluumaadka la xiriira adeegsadaha. Waxay sidoo kale bixisaa shaqooyin sida raadinta degellada kale, macluumaadka cimilada, xigashooyinka saamiyada iwm. Sidaas awgeed, boggaga waxay u adeegaan sidii awood awood u siineysa dadka isticmaala inay sahamiyaan macluumaad qiimo leh oo ku saabsan webka. Tusaalooyinka caanka ah ee bogagga noocan oo kale ah waxaa ka mid ah Yahoo, Wikipedia iwm.
4. Codsiga Websaydhka ee leh CMS:
Nidaamka maareynta maadada (CMS) waa is-dhexgal GUI ah oo awood u siinaya wax-ka-beddelka iyo isku-darka maaddada. In kasta oo la horumarinayo codsi websaydh caadiya 70% koodhku wuxuu galayaa in lagu daro shaqeynta CMS. Advanced CMS sida WordPress, Drupal, Joomla iwm ayaa hoos u dhigay kakanaantaan ilaa xad. Hadda, codsi ayaa loo qaabeyn karaa iyadoo la qaadan karo mid ka mid ah CMS-ka oo saldhig u ah isla markaana howlo kala duwan lagu fulin karo iyaga. Facebook lafteeda waxaa lagu dhisay WordPress walina waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan webka maanta.
5. Shirkadda wajahaysa / Codsiga Wajiga Macaamiisha:
Shirkad wajaheysa arjiga shabakadda ayaa ujeedkeedu yahay inay xal u hesho dhibaatooyinka gudaha iyo howlaha shirkadda. Barnaamijyadan waxaa ka mid ah codsiyada maamulka mashruuca, xallinta maareynta gudaha iwm Dhinaca kale, codsiyada macaamiisha ku wajahan waxay ujeedadoodu tahay inay u shaqeeyaan sidii wakiillada shirkadda ee macaamiishooda. Barnaamijyadan ayaa aasaasa xariijin isgaarsiineed waxayna ujeedadoodu tahay xalinta dhibaatooyinka macaamiisha iyo hagaajinta khibrada. Tusaale ahaan, miiska caawinta ee internetka, My Starbucks Idea app iwm.
Sababta Doorashada NewGenApps ?
Waa tan sababta aad u dooranayso NewGenApps horumarinta codsigaaga shabakadda: Aqoon khibrad heer domain ah inta aad soo saareyso barnaamijyada webka ee loo habeeyay. Soosaarayaal khibrad leh oo ka shaqeeyay qaar ka mid ah qaab dhismeedka ugu caansan ugana sii kordhaya. Taariikhda hore ee bixinta xalka ugu hooseeya ee dhibaatooyinka ku lug leh adeegsiga algorithms-ka horumarsan sida barashada mashiinka iyo otomaatiga. Awood u leh inuu kobciyo horumarka iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka. Awood u leh la shaqeynta habka bilowga caatada ah ee horumarka.